Camera from NASA's moon missions sold at auction - News Fitsipika
Fakan-tsary avy amin'ny NASA ny volana asa fitoriana namidy amin'ny lavanty
Ny hany fakan-tsary mba hiverina amin'ny NASA ny volana asa fitoriana ao amin'ny 1969-1972 namidy tao ny lavanty ao Vienna Asabotsy for 550,000 euro ($760,000), lavitra outdoing tombanana ny vidiny.
Ny boxy volafotsy-miloko fakan-tsary, izay namidy tany amin'ny telefaonina bidder, tamin'ny voalohany sarobidy amin'ny 150,000-200,000 euro.
Ny modely Hasselblad dia iray amin'ireo 14 fakan-tsary naniraka tany amin'ny volana toy ny ampahany amin'ny NASA ny Apollon 11-17 asa fitoriana saingy irery ihany mba ho entina miverina.
Buzz Aldrin veloma ny U.S. sainam-pirenena amin'ny Mare Tranquillitatis nandritra ny Apollon 11 amin'ny 1969. (sary: Wikipedia)
Amin'ny maha-fitsipika, ny fakan-tsary — Maro kilao celui qui nilanja (kilao) ary azo ampiarahina amin'ny anoloan'ny sehatra fitoriana — dia havela ho hamela ny mpanamory mba hitondra volana indray vatolampy, lanja ny maha-dehibe indrindra eo amin'ny iraka.
“Manana volana vovoka eo amboniny… Tsy mino aho fa misy hafa izay manana fakan-tsary,” Peter Coeln, tompon'ny Westlicht Gallery izay nikarakara ny lavanty, Hoy ny tsy fahita firy tapa.
ny fakan-tsary, izay efa namidy iray tsy miankina hetra, dia nampiasaina ny mpanamory sambon-danitra Jim Irwin mba haka 299 sary nandritra ny Apollo 15 asa fitoriana tamin'ny volana Jolay-Aogositra 1971.
Ny vilia kely ao dia voasokitra amin'ny ny isan'ny 38, mitovy isa izay hita eo ny NASA Irwin sarin'ireo.
Akaiky 600 zavatra teo amin'ny amidy ny Asabotsy. Ny Westlicht Gallery dia izao tontolo izao lehibe indrindra lavanty trano ho an'ny fakan-tsary ary efa overseen ny fivarotana ny sasany amin'ireo fitaovana lafo indrindra teo amin'ny tantara tsary, anisan'izany ny 1923 Leica fakan-tsary nitranga fahiny izay vidin'ny 2.16 tapitrisa euros, izao tontolo izao firaketana.
Ity lahatsoratra ity, ny mpilaza vaovao avy amin'ny AFP ary nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2014 AFP. Zo rehetra voatokana
22941	0 Apollon, Apollon 15, lavanty, fakan-tsary, Hasselblad, James Irwin, NASA, Vienna
← Anxiety dia mpangalatra 22 Soso-kevitra mba hampitombo ny hery fanefitra →